Augustine Mahiga oo ka warbixiyay xaalada Soomaaliya - BBC News Somali
Augustine Mahiga oo ka warbixiyay xaalada Soomaaliya
17 Sebtembar 2010
Image caption Ergayga gaarka ah ee xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya.
Ergayga gaarka ah ee xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Augustine mahiga, ayaa xarunta Qaramada Midoobay ee NY wuxuu kaga warbixiyay xaaladda ka jirta Soomaaliya.
Warbixintan uu siiyay Golaha Ammaanka kadib ayuu ku baaqay in si xoog leh loo kordhiyo taageerada military ee dawladda Soomaaliya oo dagaal ba'an ay ku hayaan xoogaga kacdoonka wada ee Islaamiyiinta.
Ergeygu, wuxuu sheegay in AU-da ay goor dhow waydiisan doonto Golaha Ammaanka in loo ansixiyo kordhinta tirada ciidamada nabad ilaalinta ee ka jooga Soomaaliya oo la gaarsiiyo 20 kun oo askari.
Wuxuu ka hadlay iyana sida ay lama huraan u tahay xukuumadda Soomaaliya in ay xaliso khilaafka dhexdeeda ah.
"iyadoo aan wada aqoonsan nahay xaaladaha qatarta leh ee dowladda ku meelgaarka ah iyo ciidamada AMISOM ay ku hoos shaqeeyaan, waxaan ugu baaqayaa dhamaan xubnaha in laga dhaqaaqo hadafkii siyaasadeed ee caadiga ahaa oo lala yimaado nidaam in tallaabooyin la qaado ku dhisan" ayuu yiri.
Augustine Mahiga, ergagyga gaarka ah ee xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay, ayaa intaas ku daray "khibradda laga helay Soomaaliya ayaa muujinaysa in inta dib u dhac iyo jawaabta loo baahan yahay aysan ahayn heer ku filnaansho mid gaarsiisay, in laga dhaxli karo dhibaatada oo qaabkeedu aad u sii adkaado. Waa in aan qaadnaa tallaabo baahsan oo wax looga qabanayo loolan adag oo na horyaalla."
Warbixinta uu ergayga gaarka ee Qaramada Midoobay u gudbiyay Golaha Ammaanka, ayaa ku soo beegmaya iyadoo muran xoog leh uu ka dhex taagan yahay madaxwaynaha iyo ra'iisul wasaaraha dowladda ku meelgaarka ah, kaasoo salka ku haya arrimaha dastuurka qabyada ah ee dalka loo samayn lahaa, iyadoo haatan ay marayso in madaxwaynuhu hortagay baarlamaanka oo uu sheegay in dowladdu ay ka soo bixi waysay howshii loo xilsaaray, uuna sheegay in uu baarlamaanka u soo bandhigayo dhibaatadaas.
Xubnaha baarlamaanka, ayaa ka doodaya kalsoonida in lagala laabto dowladda ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid, hase yeeshee, ra'iisul wasaaruhu wuxuu horay ugu dooday in falkan uu sharci darro yahay. Wuxuu ku dooday in lix bilood gudahood aan laba jeer dowladda la horgeyn karin baarlamaanka, isla markaana xubin ka tirsan golaha wasiirada oo uusan isagu u idman horgayn karin dowladda baarlamaanka.
Dhinaca kale, dowladda ku meelgaarka ah waxaa horyaalla dhibaatooyin ay ku hayaan dhinacyada kooxaha kacdoonka oo ka soo horjeeda jiritaankooda. Kooxaha oo inta badan maamula qaybaha koonfureed ee dalka iyo magaalada Muqdishoba, waxay doonayaan in ay ka taqalusaan iyaga iyo ciidamada Midowga Africa ka jooga Soomaaliya.
Dagaal ay al-Shabaab ku dhawaaqday bartamihii bisha Ramadan, ayay sheegtay in ay ku burburinayso dowladda iyo taageerayaasheeda, hase yeeshee, dagaalkan ayaan isbadal muuqda oo la taaban karo ka muujin goobihii ay labada dhinac kala joogeen dagaalka ka hor, inkastoo labaduba ay guulo kala sheegteen.